Amụma nke 2016 Atlantic Hurricane Season | Netwọk Mgbasa Ozi
Nke a ga-abụ oge ajọ ifufe nke 2016 na Atlantic dị ka NOAA si kwuo
Monica sanchez | | Ajọ Ifufe, Amụma
Oge ifufe mmiri nke 2016 Atlantic, nke malitere na June 1 wee kwụsị na November 30, ga-enwe n'etiti oké ifufe nke 10 na 16 nke a ga-amata aha ya n'ihi ike ha tụrụ anya inwe, dị ka Nchịkwa Mba. Oke Osimiri na ikuku (NOAA). N'ime ndị a, agbata 4 na 8 nwere ike ịbụ ajọ ifufe, na 4 ha ga-adị ike karịchaa.
Dabere na amụma ndị a, oge a ga-abụ nkịtị ma ọ bụ obere nkịtị.
N’afọ iri abụọ gara aga nke narị afọ gara aga, n’agbata 20 na 1980, e nwere nkezi nke ajọ ifufe nke ebe okpomọkụ 2000; isii ghọrọ ajọ ifufe, atọ n'ime ha kpụ ọkụ n'ọnụ. Agbanyeghị, afọ gara aga, oge a dị obere, 12 oké ifufe na-akpụ, 4 n'ime ha na-aghọ ajọ ifufeDị ka Joaquín, onye rutere Spain dị ka oké ifufe.
Afọ a, 2016, Ajọ ifufe Alex malitere na Jenụwarị 14, wee si na elu nke ndepụta nke ajọ ifufe ndị e guzobere kemgbe 1938. Dị ka a pụrụ isi kwuo ya: bụ ihe akaghi aka n'ime iri afọ ndị gara aga. Maka nke a, agbanyeghị na oge ifufe a na-atụ anya na ọ ga-adị mma, na agbanyeghị na enwere ihe puru 25% na ọ ga-adị mfe, ọ dị mkpa ị bea ntị na ịdọ aka na ntị ihu igwe, ebe mmetụta nke naanị otu nwere ike ịnwụ.
Site na National Hurricane Center ha kwuru na oké mmiri ozuzo a kpọrọ Bonnie Ọ na-agagharị na South Carolina na ọsọ nke 16km / h, yana oke ikuku ruo 65km / h na Mee 29. N’ụzọ dị mma, ọ dara mba wee bụrụ ịda mba nke ebe okpomọkụ.
1 Aha maka oge 2016
2 Ebee ka ajọ ifufe na-etolite?
Aha maka oge 2016
Ndị a ga-abụ aha maka oge 2016:
Ebee ka ajọ ifufe na-etolite?
Ajọ Ifufe bụ usoro ikuku dị ala nke na-agbagharị n'oge na-adịghị anya na Northern Hemisphere. Ha na-etolite n’oké osimiri nke mmiri ọkụ, nke dị nso na Equator, na-eku ume na ikuku na-ekpo ọkụ nke mpaghara ndị ahụ.
Oké ifufe bụ ihe ịtụnanya ndị sitere n'okike, mana ha nwere ike imebi nnukwu ihe, yabụ ọ bụrụ na ibi na mpaghara ebe ha na-abịakarị, ị mara, kpachara anya.
You nwere ike ịgụ akụkọ ahụ ebe a (na Bekee).
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Netwọk Mgbasa Ozi » Amụma » Nke a ga-abụ oge ajọ ifufe nke 2016 na Atlantic dị ka NOAA si kwuo
Ọ bụ ezigbo mmasị gbasara ihu igwe, ọ na-eme ka ị mata ihe ihu igwe pụtara na ụwa anyị.
5 eziokwu banyere okpomoku uwa
La Niña nwere ike ịbịa n'oge mgbụsị akwụkwọ ma kpatara ọgba aghara ihu igwe